Sidee loo wasaa gabdhaha marka loo hor guursado? - Hablaha Media Network
HMN:- Haweenka waxaa caadi ah inay ka kacsadaan cambarka, waa wax dabiici ah, naagta marka ay nin u baahato waxay wax ka dareemaysaa cambarka laakin waxaa yaab ah inay futada ka kacsato haddaba maxaa laga wadaa kacsiga dabada dumarka?
Haweenka sida la ogyahay way ku kala daran yihiin awoodda dareenka sidaa daraadeed haweenka dareenkooda uu yahay mid xoog badan ayaa laga yaabaa inay dareemaha dabada ama maroorka wax ka dareemaan, siiba marka naagta ay tijaabiso.
Gabarta waxay ku ogaanaysaa kacsiga noocaas ah marka ay siigaysato, gabdhaha bigrada ah waxay ka baqaan marka ay siigaysanayaan inay bigrada jabaan oo dhiig ka soo daato kacsi dartii.
Waxay bilaabaysaa marka ay salaaxayso kintirkeeda inay farta dabada iska galiso taas oo keenayso inay dareen ka yeelato gadaal, waayo marka ay kacsato oo meesha ay faraha ama wax kale iska galiso maskaxda ayay ku abuurmayaan waxyaalahaas marka way la qabsanaysaa.
Hadhow waxaa dhacaayo inay u barato marka nin uu ka isticmaalo gadaal ay marka sidaa ku raaxaysato, gabar carab ayaa waxay u soo qortay web ka mid ah webyada ha ka hadla bulshada iyo nolosha nafsiyaadka dhib miyay leedahay inaan iska galiyo futada buraashka lagu cadaysto raaxo baan ka dareemaa marka aan galiyo, jawaabta la siiyay oo ahayd dhib ayay kuu keenayaan falalkaas.